Wararka caalamka waxaa ka mid tirada dhimashada duufaantii Mareykanka oo korortey , Ciidamada Qadaafi oo qabsadey magaalo muhiim ah & warar kale.
Dhimashada ka Dhalatay Duufanta ku Dhufatay Mareykanka oo Sii korodhay.
Dhimashada ka dhalatay duufaanta iyo roobabka ku dhuftay gobolada koonfurta Mareykanka ayaa korodhay iyadoo imika ay mareysa 290 qof , dad badan aya la weysan yahay guryo iyo xarumaha dowladdana wey bur bureen sida ay sheegeen laamaha gargaarka.
Madaxweynaha Mareykanka Brack Obama oo lagu wado in uu booqdo gobolka Alpama ee ah gobolka ugu daran ee ku dhufatay duufaanta ayaa sheegay in arintan ay tahay dhibato dabiici ah wuxuuna ballan qaaday in xukuumadiisu ay qaadi doonto tallabo kasta oo lagu caawinayo dadka dhibaateesan.
Gobolka Alpama oo kaliya waxaa ku dhintay in kabadan 45 qof qaar kalana waa la weysan yahay waana meesha ugu khasaraha badan haddii ay noqon lahey dhimasho amaba dhibaatooyin kale.
Xaalad deg deg ah ayaa lagu soo rogay gobolada ku yaala koonfurta iyo bartamaha laamaha gargaarka iyo ciidmada dalkaasna waxey la tacalayaan sidii ay u yareyn lahaayeen dhibaatooyinka uu sababay duufaanta iyo roobabka lixaadka leh ee ku dhuftay goboladaas.
Dibad bax ballaaran oo ka dhaco dalka Siria saladda Jimcaha kadib.
Mucaaradka dalka Siria ayaa aaladda internet-ka ugu baaqay shacabka reer Siria in ay isugu soo baxaan maanta salaadda jimcha kadib dibad bax ballaaran oo lagula safanayo shacabka reer Darca oo ah meesha uu ka socda dibad baxa ballaran ee looga soo horjeedo xukuumadda Bishar Al-asad.
Wararka ayaa sheegaya in 50 qof ay ku dhinteen magaaladsa Darca ee koonfurta dalkaas kadib markii ciidanka ay rasaas ku fureen dibad baxayaasha sida ba’an ugu soo horjeeda dowladda Siria.
Wariyayasha ku sugan magaalada Darca ayaa sheegaya in ciidamada xukuumadda ay maalintii afaraad oo isdaba joog ah howl gallo kawada magaaladaas.
Hey’adaha udooda xuquul insaanka waxa ay sheegen in 500 oo qof ay ku dhinteen dibad baxyada socda isbuucii lixaad ee looga soo horjeedo xukuumadda Bishar Al-asad.
Dhanka kale dowladda Urdun waxa ay soo dhaweysay barakacayaal suuriyan ah oo kasoo cararay magaalada Darca, kadib markii ay kasoo tallaabeen xuduuda ay wadaagaan laba dal dadka qaarkood ayaa la sheegay in ay galeen dalka Urdun iyagoo lugeynaya, waxa ayna sheegeen in magaaladu ay tahay mid ciidamada dowladda ay hareereeyeen isalmarkaana ay ka jirto Cunno yari iyo dawo la’aan taasna ay ku qasabtay in ay isaga cararaan.
Qarax Shalay ka Dhacay Dalka Morocco oo La sheegay in uu fuliyay Qof Argagixiso ah.
Qarax shalay lala eegtay maqaayad ku taala magaalada Marakish ee loo dalxiis tago ee dalka Mororcco ayaa waxaa ku dhintay 14 qof oo ajaaniib u badan 23 kalana wey ku dhawaacmen kadib markii uu qof is qarxiyay taasoo dowladaha Morocco iyo Fransiisku ay ku sheegeen in uu ahaa fal ay ka dambeeyeen kooxo argagixiso ah.
Warar rasmi ah oo laga helay xukuumadda Morocco ayaa sheegay in qof naftii hure ahaa oo isku qarxiyay maqaayad caan ah oo ku taala fagaaraha Jaamac Alfanna ee magaalada Markashi tasoo 350 KM u jirta xarunta dalkaas ee Ribadh.
Dadka dhintay ayaa 11 kamid ah waxey yihiin ajaaniib ubadan dalka Fransiiska halka saddexda kalana ay u dhasheen dalkaasi Morocco.
Qof ka shaqeynayay maqaayadda uu qaraxa ka dhacay ee ka badbaaday ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Fransiiska in ninka is qarxiyay uu marka uu soo galay maqayadda dalbaday cabitaan Casiir ah kadib marka uu dhameystayna uu is qarxiyay.
Wasiirka arrimaha Gudaha ee Morocco Adhayib Sharqawi ayaa tilmaamay in ay iyagoo kaashanaya dowladaha ay saaxibada yihiin iyo kuwa deriska la ah ay ka hor tagi doonaan falalka argagixisada ah ee wax loogu dhimayto degenaasha dalkaas.
Boqorka dalkaas Maxamed Assaadis-na waxa uu ku amray ciidamada ammaanka in ay sameeyaan baritaan rasmi ah isalmarkaana ay soo qabtaan dadkii ka dambeeyay qaraxaas.
Madaxweynaha Fransiiska Nicolis Zarkozy oo qadka Telfoonka kula soo xiriiray boqorka dalkaas kadib markii uu qaraxa dhacay ayaa sheegay dhacdadu ay tahay mid aad looga xumaado oo ay ka dambeeyaan xook argagixiso ah oo foley ah.
Dowladda Masar oo sheegtay in ay si rasmi ah u fureyso Xadka Rafax ee ay lawadaagaan Gaza.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Nabiil Al-carabi aya sheegay in Xadka Rafax ee xuduuda la wadago Marinka Qaza ay si joogta ah u furi doonaan goor dhow.
Al-carabi oo u waramayay TV-ga Aljazeera ee ku hadla afka carabiga ayaa sheegay in inkayar 10 maalin ay ku dhawaaqi doonaan furitaanka Xadka Rafax si loo yareeyo cadaadiska iyo go’doominta saaran marinka Qaza.
Waziirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa intaaasi ku daray in xukuumaddii Mubarak ay qeyb ka aheyd go’doominta saaran reer Qaza ee ay Isra’iliyiintu kusoo rogeen.
Hadalkan xukuumadda Masar ayaa imaanaya xilli Isra’l ay la jahwareersan tahay heshiiskii ay magaalada qaahira kuwa gaareen dhaqdhaqaaqa Xmas iyo ururka Fatax taasoo mid aanan wanaagsaneyn ku tilmaamay ra’izul wazaaraha Isra’el Bin yamin Ntanyaho.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Isara’el Leibarman-a waxa uu tilmaamay in Madaxda Falastiin sida madaxweynaha Maxamuud Cabaas Abuu Mazin iyo Salam Fayadh Ra’izul wazaaraha aysan si nabad ah ku mari doonin marinka Qaza.
Xukuumadda Libya oo qabsatay magaalo ku taala xadka iyo Misratah oo ay dad ku dhinteen.
Magaalada Wazin ee ku taala xuduuda Liibiya iyo Tunisia oo 150 KM Koonfur galbeed ka xigta casimadda Tripoli ayaa shalay ku dagaalamay ciidamada Mucaaradka iyo kuwa xukuumadda Libya.
Magaaladaas oo ay ka talinayeen Mucaaradka oo xilli sii horeysay ka eyriyay ciidamada Qadafi ayaa imika waxaa dib u qabsaday ciidamada dowladda Libya sida ay sheegeen wakaaladda wararka ee Fransiiska iyo TV-ga qaranka ee Tunisia.
Ciidamada Mucaardka ayaa jooga Jabal Alqarbi, qof goob jooge ahaana wuxuu sheegay in ciidamada Mucaaradka ay dhanka Tunsia u carareen kadib markii dagaal xoogan ay kala kulmeen kuwa Qadafi.
Xukuumadda Tunisia ayaa shalay sheegtay in ay dhibato ku qabta dagaalada ka socda xadka ay la wadaagto Libya oo ay ku dagaalamayaan Mucaaradka iyo Dowladda.
Afhayeen u hadlay xukuumadda Tunisia ayaa la sheegay in rasaasta ay isu adeegsanayan labada dhinac ay mararka qaar gaarto gudaha Tunisia taasna ay tahay mid u baahan in wax laga qabto.
Wakaaladda wararka ee Fransiiska ayaa kasoo xigatay qof goob jooge ahaa in shan qarax ay ka dheceen Magaalada Tripoli kadib markii ay duqeeyeen ciidama Nato ee dagaalka kula jira Qadafi.
Qofka goob joogaha ayaa tilmaamay in magaalada Ceyn Zaarah ee koonfur galbeed Tripoli uu qaac qariyay, kadib duqeynta magaaladaas ayaana dhowr mar oo hore ay duqeeyeen ciidmada nato.
Magaalada Misrata ee galbeedka Libiya-na waxaa ka socda dagaal xoogan, afhayeen u hadlay Mucaaradka ayaa sheegay in 9 qof oo rayid ah ay ku dhinteen magaaladaas kadib markii ciidamada Qadafi ay duqeeyeen.
Magaalada Misratah oo ah magaalo istaraatiiji ah ayaa xukuumadda Liibiya waxa ay dooneysaa in ay kala wareegto Mucaaradka.